Imihla, izibonelelo kunye nendlela yokubandakanya ekudleni Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukongeza incasa yayo emnandi, umhla uzisa izibonelelo ezininzi zempilo. Esi siqhamo simnandi kakhulu sivela kumthi wesundu, okwaziwa ngokuba yi-date palm, intende yesundu evela kuMntla Afrika okanye eMzantsi-ntshona weAsia. Iye yatyalwa iminyaka engamawaka kwaye isetyenziswa ngokubanzi kuMbindi Mpuma.
Kukho intetho edume kakhulu ethi "abo batyala imithi yesundu abayivuni imihla." Ingcaciso kukuba umthi uthatha malunga neminyaka eli-100 ukuvelisa iziqhamo.
Nangona kunjalo, imithi yesundu ayithathi lonke eli xesha ukuvelisa imihla, ngenxa yobunjineli bemfuza obusetyenzisiweyo kwinkqubo. Okwangoku, imithi ithatha kuphela malunga neminyaka elishumi okanye nangaphantsi.
1 Iimpawu zesondlo zemihla
2 Izibonelelo zemihla
2.1 Amathambo omeleleyo
2.2 Ukulwa ne-anemia
2.3 Inceda ukunciphisa umzimba
2.4 I-Ally yabasetyhini abakhulelweyo
Iimpawu zesondlo zemihla
Njengoko sele kutshiwo, umhla utyebile kwiswekile, ngenxa yoko ukungeniswa kwawo akunakulungiswa. Ayisiyiyo loo nto kuphela, ikwangumthombo wefayibha (enkulu emathunjini!), I-Potassium, ubhedu, kunye neevithamini ezahlukeneyo, kubandakanya i-thiamine (ivithamini B1), i-riboflavin (ivithamini B2), i-niacin (ivithamini B3), i-folate, i-vitamin A kunye ivithamini K. Ukutya okuyinyani kweSUPER.
Ngenxa yomxholo wayo ophakamileyo wezimbiwa ezahlukeneyo, inegalelo ekomelezeni amathambo, oko ke kunceda ukuthintela izifo ezifana ne-osteoporosis, xa kukho umngcipheko owandayo wokophuka kwamathambo.
I-anemia ikude kakhulu kwabo batya iziqhamo rhoqo. Kungenxa yokuba inentabalala yesinyithi, isiminerali, xa sisilela emzimbeni, sibangela izifo.
Inceda ukunciphisa umzimba
Ngaphandle kwazo zonke ezinye izibonelelo zempilo, yintsimbi enkulu, enceda ekusebenzeni kwamathumbu, kunye nokubonelela ngemvakalelo yokugcwala, ukuthintela ukuba ungatyi kakhulu. Kwaye kuyanceda ukubulala ukunqwenela iilekese ezinamafutha kwaye kunokutshintsha iswekile kwiiresiphi ezahlukeneyo.
I-Ally yabasetyhini abakhulelweyo
Iziqhamo zinokunceda abasetyhini kwezi veki zidlulileyo zokukhulelwa ngokukhuthaza ukutyeba komlomo wesibeleko kwaye ke kunciphise isidingo sokunyusa abasebenzi. Ke ngoko, iququzelela ukuzalwa kwendalo.
Iziqhamo zingatyiwa, zikwimo eyomileyo, njenge snack. Kuqheleke kakhulu ukuba ufumane le ndlela ekupheleni konyaka, kunye neeapilkosi kunye neerinki ezomileyo.
Itshokolethi emnyama kunye nomhla webar